DVD ကို Nero 8 နဲ့ ဘယ်လို burn လဲ — MYSTERY ZILLION
DVD ကို Nero 8 နဲ့ ဘယ်လို burn လဲ
Nero 8 နဲ့ DVD ကို ဘယ်လို Burn လဲ ဆိုတာ သိတဲ့သူတွေပြောပြပေးကြပါ။ ကျမက VIDEO_TS ဖိုင်ကို စက်ပေါ်ကူးတင်ထားပြီးပြီ။ အဲ့ဒါကို ဘယ်လို DVD ပြန် burn ရမလဲ မသိဘူးဖြစ်နေလို့ သိတဲ့သူတွေ နဲနဲလောက်ပြောပြပေးပါနော်။
It is very easy to do. you will see nero vision in nero8 and use that application to do your needs.
drnt wrote: »
Nero 8 ရဲ့ ဘယ် version ကိုတင်ထားလည်းတင်ထားပါသနည်း။
Drive ၀ယ်တုန်းက ပါတဲ့ Essential ဆိုရင် DVD လုပ်တဲ့ Feature က တစ်လ ပဲသုံးလို့ရသလားလို့။
DVD ကူးတာကရတယ်နော်။ DVD လုပ်တဲ့ Feature ပြောတာပါ။
ကျွန်တော်အမှတ်မှားတယ်ဆိုရင်တော့ sorry ဗျာ။
လုပ်တာကတော့ VCD လုပ်သလိုပါပဲ၊ Nero ထဲက DVD လုပ်မယ်ဆိုတာရွေး၊ ထည့်မယ့် file တွေရွေး ပေး၊ NTSC တို့ဘာတို့ရွေး၊ burn ပေါ့ဗျာ။ burn speed လျော့။ ဒါပဲနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျား။